Xusuus-qorka Quruxda - TELES RELAY
Caadooyinka wanaagsan Miisaanka waayayaa rasiidhada Daawooyinka dabiiciga ah Galmada iyo xiriirada daryeelka
Brazil gudaheeda waxaa ku yaal qurxiyo xaafadaha isku raranta ah - Video
Illaa iyo hadda, moodooyinka sare ee reer Brazil waxay badanaa ka yimaadeen xaafadaha dabaqadda sare ama asal ahaan ka soo jeeda mudnaanta. Laakiin, kuwa ka imanaya xaafadaha isku raranta ah, way adag tahay in laga soo baxo masraxyada. Ugaarsadayaasha Model kuma dhiiran karaan ...
Miss France 2021: Justine Dubois, oo loo doortay Miss Poitou-Charentes!
ALEXIS WAYAN Agoosto 31, 2020 0
SAWIRRADA. Sabtigan, Agoosto 29, Justine Dubois waxaa loo doortay Miss Poitou-Charentes 2020. Diisambar soo socota, gabadha dhallinta yar ee 24-ka sano ah waxay ku matali doontaa gobolkeeda tartanka qaran iyada oo rajo ka qabta inay ku guuleysato taajka Miss France. Tani…
Miss France 2020: waa musharrax laga saaray, maadaama uu olole ugu jiray kaansarka naasaha
Chinde Agoosto 25, 2020 0
Ilaa amarka cusub, tartanku ma oggola sawirro qaawan, xitaa sababta ugu fiican. Ana alwayslle Guimbi ayaa tiri: “Waxaan marwalba sii wadi doonaa inaan difaaco waxyaabaha qiimaha ii leh. Qaabkan dhalinyarada ah, ee u sharaxan ...
5 Talooyin si aad sifiican aad u wanaajiso koofiyadahaaga
qaabku maahan mid lagu dhasho, waa la baran karaa. Waxaan kuu dooranay 5 talooyin si aad kor ugu qaaddo gooladahaaga oo aad u qanciso qof kasta oo arka adiga oo maraya. Anigoon sii dheerayn, aan ku bilowno caarada koowaad: # Jooji…
Reer Cameroon Imane Ayissi waa abuuraha ugu horeeya ee ka hooseeya Saxaraha Afrika oo usbuuc walba dhoolatus sameeya ...
Chinde Agoosto 12, 2020 0
Iyada oo saldhigeedu yahay Paris muddo soddon sano ah, reer Cameroon Imane Ayissi wuxuu taariikh taariikhi ah ka dhigay 23-kii Janaayo isagoo noqday naqshadeeyihii ugu horreeyay ee ka yimaada Saxaraha Afrika ka hooseeya si ay u soo bandhigaan Paris Haute Couture Week. Dhashay…
Timaha timaha Afrikaanka ayaa dib ugalaabtay ANGE EKA
Farshaxanistaha oo caan ku ah ruuxiisa hal-abuurnimo iyo male-awaalka, ayaa inta badan lagu sifeeyaa inuu yahay mid dabacsan oo xad-dhaaf ah. Iyo sida ay si fiican u dhigeyso, waxay go'aansatay inay timo sameyso, waxay rabto. Angel EKA, ...
5 saameeyayaasha moodada waa inaad raacdaa
bryanekobe Agoosto 12, 2020 0
5 saamileyaal fashion ah oo aad gabi ahaanba waa inaad raacdo Waxaan soo xulnay 5 saamileyaal fashion ah oo ay tahay inaad gabi ahaanba raacdo si aad uhesho muuqaalo xagaaga ah. Dhamaanteen waxaan leenahay hammi nolosha! Qaarkood waa taageerayaasha ...
Galmada, Salafiyada iyo Gu’gii Carabta - Video
Cadaadiska SIDIKI DIABATÉ wuu badalaa nooc wuxuuna ugu dambeyn qirayaa the